Raw Yohimbine HCL powder (65-19-0) Vaiti - Phcoker
SKU: 65-19-0 Category: Sex Hormone
Raw Yohimbine HCL powder (65-19-0) video
Product Name Yohimbine hydrochloride powder
Kemikari Name Antagonil, Yohimbe, Raw Yohimbine HCL powder, Aphrodine hydrochloride
Molecular Wsere 390.9
Kunyorera Point 288-290 ° C
Biological Half-Life Mushonga wacho wakakurumidza kubatwa (kunyanya hafu yenguva 0.17 +/- 0.11 h) uye nokukurumidza kubviswa kubva mu plasma (kubvisa hafu yeupenyu 0.60 +/- 0.26 h).
APane Inoshandiswa kurapa uye kuongorora dzimwe mhando dzisina simba.
Raw Yohimbine HCL powder (65-19-0) Tsanangudzo
Yohimbine isiri miti inogara iripo kumadokero kweAfrica. Iine kemiti inonzi yohimbine mumakwati ayo. Iyo bark inoshandiswa kuita zvinyorwa, mahwendefa, uye capsules.
Mune dzimwe nzvimbo dzeAfrica, tei yakagadzirwa kubva ku yohimbe bark yakashandiswa sey aphrodisiac (kuwedzera chido chepabonde).
Yohimbine hydrochloride inoshandiswa sezvokudya zvekudya zvisingabatsiri, kutamba kwemitambo, kuora muviri, kurwadziwa kwepfupa, kukonzerwa kweropa, chirwere cheshuga chirwere cheropa, nezvimwewo.
Yohimbine hydrochloride, yakajairika fomu yohimbine, inowanikwa muUnited States seyakanyorerwa mushonga wekusagadzikana. Ichi chigadzirwa chakasiyana pane chekudya chinowedzera kubva kune bark remuti.
Yohimbine hydrochloride powder (65-19-0) Mechanism of Action
Yohimbine hydrochloride is pre-synaptic alpha 2-adrenergic blocking agent. Iyo chaiyo michina yekushandisa kwayo mukusakwanisa haina kunyatsojekeswa. Nekudaro, yohimbine inogona kushandisa zvayakaipira mukugona kuburikidza nekuvharisa kwepakati alpha 2-adrenergic receptors inogadzira kuwedzera kwekunzwisa drive sekondari kune kuwedzera kwekuburitsa norepinephrine uye mukupfura huwandu hwemasero muuropi Noradrenergic nuclei. Yohimbine-mediated norepinephrine kusunungurwa padanho remasumbu mashupu anogona zvakare kuve achibatanidzwa. Mukuwedzera, migumisiro inobatsira inogona kusanganisira mamwe ma neurotransmitters akadai dopamine uye serotonin uye cholinergic receptors.
Kushandiswa kweRaw Yohimbine HCL powder (65-19-0)
▪ Kuora mwoyo.
▪ Kuedza kuita basa.
▪ Musoro kumhanya (orthostatic hypotension).
▪ Zvinetso zvepabonde zvinokonzerwa nekusarudza-serotonin reuptake inhibitors (SSRIs).
▪ Dya muromo.
▪ kurwadziwa kwepfupa.
▪ Dhiyabhorosi zvinetso.
▪ Mamwe mamiriro ezvinhu.
Yakakurudzirwa Yohimbine hydrochloride powder (65-19-0) Dosage
Yohimbine Hydrochloride inonyanya mumhando ye capsules ne Yohimbine extracts kana Yohimbine hydrochloride powder. Dzimwe nguva, tinogona kuona Yohimbine hydrochloride muchimiro chemvura, sechinyorwa. Imwe nzira ndeyekutsvaga, kana kudya Yohimbe yose midzi, asi nekuda kwezvinetso nekuwanikwa kwayo uye kwete zvakajeka mamiriro ezvinhu, hatisi kukurudzira.
Iwe unofanira kutanga neipi ye 5 mg ye Yohimbine hydrochloride zuva. Unogona kuwedzera kunyange ku15-20mg pazuva, kana iwe uchida kuwana mamwe maitiro ekushandiswa kwayo, asi sekugara tichikurudzira kuchenjerera! Usapfuurira!
Zvimwe zvikamu zveRaw Yohimbine HCL powder (65-19-0)